Abụ m oghere ** | Martech Zone
Abụ m oghere **
Tọzdee, Nọvemba 20, 2008 Friday, April 23, 2021 Douglas Karr
Abụ m oghere **?
Ndị na-agụ blọgụ m na-akwụchitere m ma na-agwa nkwanye ùgwù, agụụ, na ọmịiko m na-agbalị ịnye site na blọọgụ m. O doro anya na ọ bụ onye m na-arụ ọrụ na nke m na-agbalị ịrụ ọrụ zuru oke kwa ụbọchị. Blog posts nwere uru nke nhazi oge (ọ bụ ezie na n'oge gara aga, abụ m mara mma), ma ndụ n'ezie anaghị arụ ọrụ otu ahụ.
Enwere m agụụ mgbe niile maka ozi. M na-ewe iwe na onwe m mgbe onye ọzọ na-eweta nkà na ụzụ ọhụrụ nke m na-amaghị ihe ọ bụla. Mgbe otu ụbọchị na-arụ ọrụ, m lie onwe m na Internet na-enyocha ihe ọ bụla na ihe niile na mbara ala. M chọrọ ịmara ya niile. M chọrọ inwe echiche banyere ihe niile (na m na-emekarị).
Mụ na ndị ọrụ ibe m, ana m agbasi mbọ ike ịmata ebe njedebe nke ibu ọrụ m na-amalite na njedebe. Iduzi ụfọdụ usoro dị mkpa nke ụlọ ọrụ anyị, enweghị m ike ịbị nzukọ ọ bụla ma tụfuo 2 cents na mkparịta ụka ọ bụla. Anyị eweregoro ndị ọrụ nwere ọrụ karịa ma marakwa ọrụ ha karịa ka m ga-adị. Ọ bụ ezie na ọ na-anụ m ọkụ n'obi, ọ dị m mkpa ịhapụ onwe m ma tinye uche m na mpaghara ebe m nwere ike ma ọ ga-enwerịrị mmetụta.
N’izu a ka m gwuola Ọchịchị Na-adịghị Ahịrị: Iwulite Ebe Ọrụ Ọzụzụ Ndị Ọrụ na Ndụ Onye Na-abụghị by Robert Sutton. Ọ bụghị kemgbe ị gụrụ Agwọ na Ekike: Mgbe Psychopaths Na-arụ Ọrụ, enwere m agụụ na-agụ akwụkwọ na omume na akparamaagwa n'ebe ọrụ.
Ruo ọtụtụ afọ, echere m (ọ dịghị onye nyere m) nchekasị nke ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke nzukọ. Ahụrụ m ka ọtụtụ ndị ọrụ ibe m riri ndụ site na nrụgide nke ọrụ ahụ ma mụ onwe m atawokwa mbibi dị egwu.
Ikekwe ana m eji ihe nkiri iri abụọ eme ihe nkiri na-eso m n'azụ, mana nke bụ eziokwu bụ na m nwere oke mmụọ maka ọrụ m na-arụ taa dịka m siri dị afọ iri gara aga. Anaghị m ewepụ agụụ m, ma ọ bụ na anaghị m ezo ya. Agbanyeghị, etolitere m inwe mmetụta nke mmetụta uche na nsogbu na ibu ọrụ nke ndị ọrụ ibe m na-aga ịkọwapụta na igbu ya.
Ihe si na ya pụta bụ ihe ịga nke ọma! Ana m agafe ihe mgbaru ọsọ m nke anọ ugbu a, na-enwe mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ m, na anaghị ele m anya (kpamkpam) dị ka oghere ** dịka m nwere ike ịbụ n'oge gara aga. M tụkwasịrị obi na ndị mmadụ na-eme mkpebi gburugburu m, ọbụna mgbe m na-ekwetaghị. Agaghị m etinye azụmaahịa ma ọ bụ onye ahịa nọ n'ihe egwu, mana achọrọ m ka ndị na-elekọta gị ghara ile anya n'ubu ha ma ọ bụ chegbu onwe m maka ihe m chere.
Site na ịhapụ mmetụta uche na mkpebi ndị na-abụghị nke m, ọ na-enye m ohere karịa iji meziwanye ọrụ nke m am na-achịkwa. Ya mere, nke a bụ ndụmọdụ m nye gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma na-arụ ọrụ echi:
Kwụsị ichegbu onwe gị banyere ọrụ onye ọzọ kwesịrị ịna-arụ.
Nye echiche gị mgbe a jụrụ gị, ma ọ bụghị ya debe ya n'onwe gị (belụsọ ma ọ na-etinye ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa n'ihe egwu).
Mụta otu esi ewepu obi na mkpebi na usoro ị na-enweghị.
Lekwasị anya n'ọrụ gị nwere ike mee ihe dị iche na.
Ga-enwekwu obi anụrị, onye were gị n'ọrụ ga-enwe ọsịsọ ọsọ, ndị mmadụ agaghị akpọ gị oghere **.
Nye Iwu Ọchịchị Na-enweghị Ike na Amazon
Tags: Ikeakwụkwọ ahịaenweghị ọchịchị ịnyịnya ibuUgonna Onyekwere
StumbleUpon na-aga n'ihu Nri Blog m
Nov 20, 2008 na 11:40 PM
Amaghị m na nke a ga-abụ blọọgụ blọgụ jupụtara. Anọ m na-atụ anya ihe dị ka ntuli aka nke onye na-agụ ya, m ga-elele ngwa ngwa ee ma ọ bụ ee bọtịnụ ma gaa n'ihu.
Naanị sir. Ezi post. O siiri m ike ịhapụ ụfọdụ ihe, mana dị ka gị, echere m na m na-amụta otu esi eme ya karia kwa ụbọchị.
Enwere m ike ịgbazite akwụkwọ ahụ n'aka gị, mana nke ahụ ga-abụ akwụkwọ nke anọ na m nọ n'etiti ịgụ.
Nov 20, 2008 na 11:46 PM
Ya mere, gịnị ga-esi na ntuli aka gị pụta? 😉
Nov 21, 2008 na 7:38 AM
Ezi post. Nke a kachasị oge dị ka ihe ncheta dị mma karịa otu anaghị achịkwa ihe niile, n'agbanyeghị ụdị ụlọ ọrụ ahụ na n'agbanyeghị etu ego si dị ukwuu.
Nov 21, 2008 na 8:03 AM
Enwere m olileanya na ị gaghị eche na m bụ oghere ** maka iri kọfị ikpeazụ na iko Bean! Kidding, mu na gi ma na odi ndi ozo ka m lachara after
Nov 21, 2008 na 9:40 AM
Anyị achọghị ịgwa gị ihe ọ bụla, mana. . . 🙂
Enwere m ike itinye post a na nke m na-abịa Ntughari akwukwo nke akwukwo?
Nov 21, 2008 na 1:43 PM
Hi Clark, ị ga - agbakwunye ya. Daalụ maka ịjụ.
Nov 21, 2008 na 12:49 PM
Achọpụtala m nke a n'oge na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ. Ndị ọrụ ibe na-etinye obi ha dum na ihe ha hụrụ bụ mkpebi na-ezighi ezi nke ha na-enweghị ike ịchịkwa. Ọ sụgharịrị ịbụ àgwà na-adịghị mma, ahụ adịghị mma, ike ọgwụgwụ, na ọ ga-emetụta ogo ọrụ ha. Ọbụna nke ka njọ, ejiri m n'aka na njikwa na-ama.